iMac Pro ga-arịgo ndị nrụpụta ihe sava ọhụrụ, nke aha ya bụ Purley | Esi m mac
iMac Pro ga-arịgo ndị na-arụ ọrụ sava ọhụrụ, nke aha ya bụ Purley maara
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | iMac, Noticias, ọtụtụ
Na WWDC ikpeazụ anyị mụtara banyere atụmatụ pụrụ iche nke iMac Pro nke anyị ga-amata na ọnwa ndị na - abịanụ: ndị nhazi 18-isi, kaadị ndịna-eme elu dị elu, ebe nchekwa ruo 4 Tb ma ruo 128 Gb nke RAM. Ya mere, rue ugbu a anyị maara ihe nke a super mac, ma anyị amachaghị ihe ndị ọ ga-ebu. Na-enweghị ịga n'ihu, Mac ọ bụla na-akụ ahịa ahụ nwere nchekwa SSD ngwa ngwa. Banyere ndị nhazi ahụ, ihe niile yiri ka ọ na-egosi na ọ ga-ebu ihe ọhụrụ Intel gosipụtara. Ma eeegún Ulo akwukwo nke Pike, Intel ga-arụ ọrụ na nhazi ọhụrụ, ikekwe ezubere kpọmkwem maka iMac Pro mbụ nke Apple mere.
The ozi ọma ga-metụtara ọhụrụ processors, nke anyị ga-amarakwa n'okpuru aha Skylake-EX na Skylake-EP, dabere na ikpo okwu nwere aha Purley. O doro anya, a maara akụkọ ahụ mgbe ị gụsịrị MacOS High Sierra beta ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ozi ọma ahụ ziri ezi, iMac Pro ọhụrụ agaghị enwe nhazi ahụ izu ole na ole tupu ogbako ndị nrụpụta emere na mbido June, nke a maara Usoro Core-X, n'okpuru aha ahia Skylake na Kaby Lake, ikekwe na-ahapụ nke ikpeazụ maka ndị ahịa iMac anyị jiri ruo ugbu a. Ihe Intel kwadebeere anyị, anyị amaghị.
Otu blog ahụ na-agbakwunye na iMac Pro nwere ike ịnwe ọzọ ARM eri. Ihe owuwu a bu ihe eji eme ya na MacBook Pro na Touch Bar, dika ihe oru ARM a bu ikike maka njikwa Touch Bar Ya mere, ihe obula na egosi na anyi gha enwe Touch Bar na iMac Pro na It ga - achọta na keyboard ahụ Apple gosipụtara anyị.
Ulo akwukwo nke Pike, dị elu ọnwa abụọ tupu ngosi nke iMac Pro, ụfọdụ atụmatụ ndị iMac Pro ga-enwe na amụma ya ziri ezi na oke pasent.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » iMac Pro ga-arịgo ndị na-arụ ọrụ sava ọhụrụ, nke aha ya bụ Purley maara
Ugbu a dị na Mac App Store Warhammer 40.000: Dawn of War III
Apple bidoro iwe ndị ọrụ maka ebe nleta Apple Park